Video: Arimaha Media | Martech Zone
Video: Arimaha Media
Axad, Febraayo 24, 2013 Douglas Karr
Xalay waxaan ka qayb galay Bandhigga Filimka Franklin, xaflad sanadle ah oo loogu dabbaaldego fiidiyowyo ay duugeen, duubeen oo soo saareen ardayda Dugsiga Sare ee Franklin Indiana. Fiidiyowyada gaagaaban dhammaantood waxay ahaayeen kuwo dhiirrigelin leh oo guuleystaha midna la wacay Warbaahinta Muhiimka ah waxaa qoray Austin Schmidt iyo Sam Meyer.
Filimku wuxuu diiradda saarayaa wareegga wararka wuxuuna isbarbar dhigayaa telefishanka maxalliga ah, wargeysyada iyo raadiyaha iyo sida ay ula jaan qaadayaan baahida degdegga ah ee ka jirta bogga iyo warbaahinta bulshada. In kasta oo ay jirto baahi baahsan oo ku saabsan nuxurka iyo dhagaystayaasha ayaa lagu wadaagayaa dhammaan warbaahinta, sheekadani waa, wax la yaab leh, tusaale weyn oo ah waxa muhiimka u ah furaha suxufiga wanaagsan. Blog-yada iyo warbaahinta bulshada waa aalado muhiim u ah isku xirka iyo daabacaadda si deg deg ah, laakiin nuxurka sida caadiga ah si buuxda looma baarin loomana diiwaangaliyo sheeko uu qoray wariye wanaagsan.
Macluumaad weyn marwalba si wanaagsan ayaa loo isticmaali doonaa. Saxafiyiintu waa inaysan la tartamin wareegga wararka 24/7, waa inay bixiyaan qoto dheerida loo baahan yahay si aan si buuxda ugu fahamno mowduuc la bixiyay. Waxaan u maleynayaa inay tahay waxa ku lumay dagaalka indhaha kubbadda indhaha waana si sax ah sababta aqriska iyo daawashadu uga warwareegayaan warbaahinta soo jireenka ah. Maaha in warku sifiican uga wanaagsan yahay khadka tooska ah ee waa in wararka si fudud aan si fiican loo soo tabin. Waxaan rajeynayaa in Austin iyo Sam ay tan ku barteen sida ay wax u qorayaan oo ay u soo saareen sheekadooda weyn.
Waxaanan rajeynayaa inay taasi tahay waxa ay suuqleydu ka baranayaan quudinta bahalka sidoo kale. Qoritaanka nuxurka si loo qoro nuxur ahaan waxay nusqaaminaysaa diiradda dhagaystayaashaada mana siinayso iyaga macluumaadka ugu dambeeya ee ay raadinayaan. Si fiican wax u qor, wadaag inta badan, oo samee waxyaabo la yaab leh.
Tags: austin Schmidtha moogaanxafladda filinka franklinarrimaha warbaahintasam meyer
Baraha Bulshada ayaa Lagu Sharaxay Kafee